Koofiyadaha Jumlada Ciyaaraha Jiilaalka Cadceedda ee loogu talagalay ragga iyo dumarka Soo saaraha iyo Alaab-qeybiye | Kormeer
1. Xiritaanka Hook iyo Loop
2. Dhalaalka ka bixi Indhahaaga: Miyaad xanuunsan tahay oo aad ka daashay qorraxda indhahaaga soo galaysa, dhammaantood laakiin si ku meel gaar ah ayaa kuu indho tiraya. Taasi waa waxa aan halkan u joogno. Koofiyadaha visor-ka ee la hagaajin karo waxay ka ilaalin doonaan dhalaalka indhahaaga, waxayna u muuqdaan kuwo aad u fiican inta ay sidaas sameynayaan, sidoo kale.
3. Ku fiican Ciyaaraha iyo Hawlaha Bannaanka: Tan outdoor sdekedaha sun visor hats waxaa loogu talagalay inay noqdaan miisaan fudud, neefsasho iyo raaxo leh. Weligood jidkaaga ku soo dhici maayaan, sidaa darteed iyagu waa qalabka ku habboon ee wadista, orodka, cayaaraha, iyo waxqabadyada kale ee bannaanka.
4. Waxyaabaha Tayada Sare: Marka ay timaado kuweenna outdoor sdekedaha sun visor hats, waxaan ka dhignaa hal dhibic oo aan isticmaalno wax aan ahayn tayada suufka dabiiciga ah ee ugu tayada fiican, iyo sidoo kale hababka wax soo saarka casriga ah iyo xakamaynta tayada adag.
5. Qalab Casri ah oo Casri ah: outdoor sdekedaha sun visor hats s ayaa aad uga badan sidii aad uga badbaadin lahayd qorraxda, ama qalab isboorti. Xaqiiqdii waa qalab casri ah oo casri ah, iyo hab fiican oo looga sarreeyo isboortiga magaalooyinka ama qaabka caadiga ah.
Waxyaabaha cudbi Waxyaabaha kale sida waafaqsan shuruudaha iibsadaha.
Cabir 58 cm Ama loo habeeyay
Midab Liinta jaalle Midabka caadiga ah ee la heli karo (Midabbo gaar ah oo la heli karo markii la codsado, oo ku saleysan kaarka midabka pantone)
Astaanta Dahab Waxay noqon kartaa Daabacaadda, Patchwork, 3D Embroidery, Calaamado isdabajoog ah oo Sare Laheli Karo
Xiritaanka Dhabarka Xiritaanka Hook iyo Loop Nooca kale ee xiritaanka suunka gadaal ayaa loo habeyn karaa
Astaamaha: Dhar cudbi ah oo daahir ah, dhidid dhidid dhakhso u qalajinaya 'hygroscopic', bakteeriyada lidka ku ah iyo uumeynta jirka.
Isticmaalka Safarka, Buurta fuula, Bannaanka, Madadaalada iwm.
Waqtiga dirida 1. Waqtiga tusaalaha: 7-15 maalmaha shaqada
2. Waqtiga wax soo saarka: 45-60 maalmood ka dib amarka la xaqiijiyay oo muunad la ansixiyay
Shuruudaha Bixinta Wareejinta Telegraph T / T (30% deebaaji ah ka hor amarka la xaqiijiyay, bixinta dheelitirka ka hor rarka)
Tacliiq 1. Maaddada, midabada, qaabka iyo qeexitaanka outdoor sdekedaha sun visor hats waxaa loo samayn karaa si waafaqsan shuruudahaaga.
2. Koofiyadaha taxanaha: Koofiyad baaldi moodada, outdoor isboortiga sun visor hats, Koofiyad Xayeysiin, Koofiyad baseball, Koofiyad Milatari, Mesh Cap, Kid's Cap, Jiilaal qaboobaha, Koofiyadda Buugga Camouflage, Koofiyad la dhaqay, Koofiyad kalluumeysi iwm.
3. Waxaan kuugu jawaabeynaa si waafaqsan su'aalahaagii ugu dambeeyay 12 saacadood gudahood.
★ Kusoo dhawow amarkaaga OEM ee loogu talagalay koofiyadaha isboortiga banaanka.
Hoos waa koofiyado kale oo qorraxda lagu ciyaaro oo banaanka ah, haddii aad xiiseyneyso, fadlan noo soo dir lambarka lambarka, haddii ay kaa reebayso koofiyadaha isboortiga banaanka ku habboon, fadlan noo soo dir deign ama shaybaarradaada.
Hore: Bannaanka UPF 50 + Kalluumeysiga Qorraxda Kalluumeysiga oo la sudhay Qoorta
Xiga: Calaamada Ragga Aabaha Suufka Baseball-ka
Koofiyadaha Cunugga Qoraxda
Cotton Qoraxda Koofiyad Baby
Kalluunka Kalluumeysiga Qorraxda
Koofiyad Kalluumeysiga Qorraxda
Neefsasho la hagaajin karo ...
Home Dookh ...
Kalluumeysiga xagaaga & ...
Jiilaal Jiilaal Diiran Knitt ...